Edgar Badia kaddib markii uu maaliyada ka badashay Messi: “Haa, waan la yaabay, laakiin …” – Gool FM
(Barcelona) 25 Feb 2021. Dhacdo yaab leh ayaa ka dhacday garoonka Camp Nou kaddib guushii ay Barcelona 3-0 kaga badisay Elche xalay, markii Edgar Badia uu weydiistay Lionel Messi maaliyadiisa.
Lionel Messi ayaa kaddib markii ay ciyaarta dhamaatay wuxuu go’aansaday inuu maaliyada ka badesho goolhaayaha kooxda Elche, Edgar Badia ayaana qoraal uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka wuxuu ku xaqiijiyay inuu la yaabay markii kabtanka Barcelona uu weydiistay maaliyadiisa.
Kaamirooyinka ayaa waxay qabteen falcelintii uu sameeyay Edgar Badia, waxaana baraha bulshada qabsaday goolhaayaha kooxda Elche oo layaab dartiis qosol la dhacay kaddib codsiga kaga yimid Lionel Messi.
Edgar Badia ayaa qoraalka uu soo dhigay boggiisa Twitter-ka wuxuu u dhignaa sida tan:
“Haa, waan la yaabay,” Badia ayaa sidaas ku soo qortay Twitter-ka.
“Laakiin miyaad ogtahay waxa aan ku fikirayay oo ay ahayd natiijada ka soo baxday?
“Taasi waa in kooxdaan la badbaadin doono, Naadi ahaan, iyo koox ahaanba.
“Waan sii wadaynaa inaan qaadno tallaabooyin aan horay u qaadnay oo aan ku horumarinayno oo aan kula tartamayno cid kasta oo nala tartamaysa.
“Qeybtii hore ee ciyaarta mid weyn ayay ahayd shalay! aynu sidaan yeelno.”